Sidaamaa: 'Gaaffilee naannoo ta'uu irratti kallattiin kaa'ameera' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dargaggoonni hedduun karaatti bahanii gammachuu isaanii ibsataa jiru
Guyyoota kudhaniif wal gahiirra kan ture paartiin Naannoo Uummattoota Kibbaa bulchaa jiru 'Sochii Diimokiraatawaa Uummattoota Kibba Itoophiyaa' gaaffii naannoo ta'uu uummattoonni naannichaa dhiyeessan bifa saayinsawaan qorachiisee kallattii kaa'eera jedhe.
Qorannoo saayinsawaa baatilee torba darbaniif taasifame kanaan murteen uummattoota hunda qixa fayyadamoo taasisu murtaa'uu isaa ibsi kun ni hima.
Haa ta'u malee murteen murtaa'e ifatti maal akka ta'e hin himne.
Paartichi naannoon Sidaamaa akka naannootti akka labsamuu waliigaleera oduun jedhu dursee dhagaa'amuu isaatiin Jiraattonni magaalaa Hawaasaa miira gammachuu guddaan Wiixata karaatti bahanii sirbaa oolani.
Jiraattoonni Godina Sidaamaa gaaffii naannoo ta'uu waggaa tokkoon dura dhiyeessanii turan irratti Dilbata Magaalaa Hawaasaatti walgahuun mari'atanii turan.
Jaarsoliin Sidaamaa karoorri godinicha akka naannootti labsuu haaluma qabameen akka raawwatu murteessaniiru jedhamulleen, hirmaataan walgahichaa BBC'n dubbise garuu dhimmi ifatti irratti waliigalame akka hin jirre hime.
Ayyaana foonirraa bilisa ta'e, Fichee Cambalaalaa
Walgahii magaalaa Hawaasaa dirree ayyaanni Fiichee Cambalaalaa itti kabajamu 'Gudumaale'tti taa'ame kanarrattis jaarsoolii, hoggantoonni aadaa fi bakka bu'oonni dargaggoota hawaasichaa irratti qooda fudhataniiru.
Walgahicha irrattis osoo mootummaan itti walii hin galiin Adoolessa 11 naannoo Sidaamaa labsuu ilaalchisee hirmaattota irraa yaadni dhiyaateera.
Paartiin Naannoo Uummattoota Kibbaa bulchaa jiru walgahii guyyoota 10 itti ture xumurus jira, ifatti dhimma kanarratti murteen dabarse hin baramne.
Haa ta'u malee gaaffii uummata Sidaamaa irraa dhiibee dhufe kanatti waliigaluu isaa gabaasaaleen marsaalee hawaasaa irratti bahaa jiran ni mul'isu.
Kanuma hordofuun magaalaa Hawaasaa keessa ganama Wiixata miira gammachuu guddaatu jira.
Goodayyaa suuraa Magaalaan Hawaasaa miira gammachuu guddaa keessa jirti
Naannoo ta'udhaaf gaaffii godinni Sidaamaa dhiyeesse manni maree bakka bu'oota uummattoota Kibbaa A.L.I Adoolessaa 11 bara 2018 ture kan mirkaneesse.
Sana booda waggaa tokko keessatti riifarandamiin raawwatamuutu irra ture. Sun ta'uu waan dhabeef guyyaadhuma sanatti naannoo Sidaamaa labsuuf dargaggoonni fi jaarsoliin kan murteessan.
Walgahii jaarsolii Sidaamaatiin hogganame kanarratti jiraattoonnii fi miseensoonni hawaasichaa hedduun kan argaman yoo ta'u, ajandaa olaanaan walgahichaas dhimma naannoo ta'uu irratti mari'achuuf ture.
Jalqaba walgahichaarratti qaamolee nageenyaa waliin walitti bu'iinsi kan ture yoo ta'u, erga hoggantoota walgahichaa waliin haasaa taasisaniin booda walgahichi nagaan taasifamuu hirmaattonni BBC'tti himaniiru.
Garuu ummanni godinichaa gaaffii naannoo ta'uu kaaseef waan irraa eegamu raawwateera kan hafe ammoo kan Naannoo Kibbaa fi mootummaa jiddugalaa akka ta'e ibsaniiru.
Goodayyaa suuraa Miira jiraattota magaalaa Hawaasaa Wiixata ganamaa
Dhimmicha ilaalchisee Ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad haasaa mana maree bakka bu'oota ummataatiif torban dura taasisaniin, gaaffichaaf deebiin seera qabeessa ta'e hanga kennamutti obsaan akka turan gaafatanii ture.
Akka Lakkoofsa Sidaamaatti barri 2011 jalqabeera
''Qaamni humnaa fi daboodhaan kana raawwachuu barbaadu yoo jiraate,'' seera kabachisuuf mootummaan tarkaanfii akka fudhatu akeekkachisun isaaniis ni yaadatama.
Naannoon Kibbaa sabaa fi sablammileen 50 ol ta'an keessa kan jiraatan yoo ta'u, Sidaamaa dabalatee kanneen gaaffii naannoo ta'uu kaasan hedduudha.
Fichee Cambalaalaa: Ayyaana foonirraa bilisa ta'e
ABO dabalatee dhaabbileen siyaasaa torba walta'an
Gabra Gurraachaatti hidhattoonni ajajaa poolisii rukutani
Bulchaan Naayiroobii Maayik Soonkoo malaammaltummaan hidhame
Arsenaal itti fufee mo'atamamoo maaltu ta'a?
Dubartiin cidharratti 'shubbisa addaan kutte' rasaasaan rukutamte
Weellisaan 'dubrummaa' intala isaa waggaa waggaan qorachiisu mormii kaase
Kiniiniin karoora maatii ji'atti al-tokko fudhatamu yaaliirra jira